Izindlu zaseHynesville - I-Airbnb
Port au Port, Newfoundland and Labrador, Canada
Iindlwana zethu ezimbini zikuNxweme oluseNtshona olubukekayo lwaseNewfoundland ePort au Port, kufuphi nePoint au Mal. I-cottage ephambili inamagumbi okulala ama-2 (ibhedi eyi-queen eyi-1 kunye neseti ye-1 yeebhanti zamawele) kunye nendawo yokuhlala enesofa yokutsala. Kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, amagumbi okuhlambela ayi-2, indawo yokosa inyama kunye nempahla yokuhlamba impahla.
Indlu yesibini inegumbi lokulala elinye kunye negumbi lokuhlambela elinamaqhekeza ama-2, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nendawo yokuzonwabisa. Iindlwana ezimbini zonyaka wonke ziqeshwa kunye.
Ezinye iimpawu zepropathi yethu zibandakanya indlela yokuhamba egcinwe kakuhle ebonelela ngokufikelela kunxweme lwabucala, kunye nendawo yokucima umlilo apho unokuphumla kwaye wonwabele iimbono ze-360 eziya kulwandle kunye nentaba yePine Tree.
Indawo yethu ibekwe malunga nemizuzu eli-15 ukusuka eStephenville ngemoto (ibonelelwa yiSunWing kunye neProvincial Airlines), kwaye malunga neeyure ezi-2 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya esikhulu esikufutshane eDeer Lake. Le ndawo ibonelela ngesetingi esifanelekileyo seholide zosapho okanye izibini ezibalekayo, kwaye ibekwe ngokufanelekileyo kufutshane nenani leendlela zasekhaya ze-ATVing, ukuzingela okanye ukukhwela intaba. Simi malunga nemizuzu eli-15 ukusuka eCold Brook kunye neLewis Hills ezineATV ezibalaseleyo / iindlela zokutyibiliza. Kukwakho nenani lescenic drives ezinokufunyanwa kwindawo. Kufuphi iStephenville ibonelela ngezinto ezininzi ezibandakanya iindawo zokutyela, iivenkile ezithengisa ukutya kunye negrosari, kwaye ilikhaya kwibala legalufa lasePort Harmon Seaside Links.
Bonisa zonke 25 izinto onokuzisebenzisa
Imizuzu emi-5 ukusuka ePort au Port kunye nemizuzu eli-15 ngemoto ukusuka eStephenville NL
Ndifumaneka ngetekisi okanye nge-imeyile.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Port au Port